HALKAN KA DAAWO: AMB XUSEEN CALI DUCAALE WASIIRKII HORE EE MAALIYADDA SOMALILAND OO TAARIKHIHI ISRAACA SOOMAALIWEYN KA SHEEKEYE | Saxil News Network
HALKAN KA DAAWO: AMB XUSEEN CALI DUCAALE WASIIRKII HORE EE MAALIYADDA SOMALILAND OO TAARIKHIHI ISRAACA SOOMAALIWEYN KA SHEEKEYE
Hargeisa (SAXILNEWS)_Waxyabo badan inaga ina soo maray had iyo jeer khilaafkeena siyaasadeed yanu ina ilowsiin qadiyada inu taala, qadyadd culus ayaa inu taala oo xaajmigeda leh oo cadowgeeda leh oo hadaynan midnimo kaga bixin aynan meelna gaadhayn. Dowladnimo ayaa inaga luntay lixdaanki baynu lalaabnay oo xamar aynu geynay. Daariiq dheer ayaynu soo marnay oo halgan ah oo dhibato leh oo burbur leh oo dhimasho leh oo jacdad badan leh, mar walba wa inaad xasusnato wixi shalaytoole aynu soo marnay umada taariikh dheer isku xidha oo ay ku ilowbaan durufo siyaasadeed ee maalimeedka ah ee marka jirey. Waxa ay umadu ku ilowda marka ay dib uu eegto wixi ay soo mareen halgankii dheera, umadaha taariikhda isku xidha umada had iyo jeer waxa aan ku tuuhma shalaytoole mar xalay.
Beritoolena malaha wa manta fursadu, waxa loo bahan yahay inaynu ogaano in dariiq dheeri ina sugayo, ictiraafkii ina sugayo. Dowlada manta jirta horumarka ay gadhay wa horumaar umadu qaranku uu leeyahay weyee, inaynu isu qorno wixii dowlada buuxiga ah ee ay keentay ee lo qoro wasirkii ee keenay in lo qoro wa loo bahan yahay. Khilaafka siyaasadeed wa mamul wa kubada ay labada kooxod wada ciyarayaan ay isku xanaqayaan, marka ay kubadu dhamaatona la isa salaamayo.
Jubaadi lixdaanki inaga tuurtay lixdaanki dowladnimadeeni wa inaynu ka qorna oo saraa uga kaacna, waxa an isbarbar dhiga had iyo jeer jubaadi beriga lixdaanki in hayse ee israac Soomaaliyeed ee Soomaaliweyne iyo dareenka umada reer Djibouti ku jiray marka ee aan juubo aan lahayn ay dowladnimadodi doonayeen inay meel ku hubsadan. Waxa aan xasusta anigu ah saafiirka Nairobi aya waxa Taar laa iso direy la leeyahay Xasan Guleed (Madaxweynihi Djibouti wakhtiga) ayaa waxa ku soo marayaa iyo Axmed Dinii oo ku socda Dari Salaam shirki AU-da, madaarka marka aan ka soo qaday guriga ayaan casho ugu sameyee habeenkii. Wa Xasan Guleed, Axmed Dinii iyo Saafiir ku xigeenkayga safaarada oo ahaa nin ciise ah oo la yidha Dahir Cisood ah. Marka aanu cashaadi uu fadhisanay bu Dahir Cisood ku yidhi Xasan Guleed adeer Xasanoow iska hadla ninkani wa saraakishi inqilaabka reer waqoyiga, marka sii nefis ah uu hadla. Marka uu sida uu yidhi Axmed Dinii ba hadalkii qataay wuxu yidhi waxa ilahay umad abuuray, anigu canfaari ban ahay bu yidhi.
Waxa ilahay umad abuuray cid Soomaali naga xigta maa jirto lakinse Soomaali ma ihii, hadi uu Xasan Guleed intisa badweyn Soomaaliyeed geyoo ana intayda waxa la tegi dona meel uun ban la tegi bu yidhi. Xasan ba hadalkii qaatay wuxu yidhi saafiir horta marka israacdeen konfuur maxay idin siyeen, ma laba wasiir ma mid ma sadeex. Inta aan jawaabin, wuxu yidhi wuxu Allah ku sahlay calankan anigu ma lihii carurtaydu ma lahaa, qoyskaygu malaha, beeshaydu malahaa umaad baa leh. Aniga ima taalo umada Djibouti ayay uu taala meesha ay genayaan, sidiini igama suroowdo bu yidhi in shan nin umad calankeedi, masiirkeedii iyo mustaaqbalkeedi ay shan nin saxeexan hasha bu yidhi.
Umad baa leh bu yidhi iyaga ayay uu taala, wa inta anagu juubadi in ilowsisay ee ahayd umad baa calankan leh iyaga ayay uu taala waydiya iyaga. Waxa marka weyee aan ujeeda waxad arkaysa Soomaalinimadi halka ay ka dhimaatay, waxa weyee Muqdisho ayay ka dhimaatay. Lixdaanki israaci wixi ka dambeyee Soomaali mabay jiriin, maalinti israaca Soomaalinimadu israacuna Soomaaliweyn la saaqiirtay ayuu israaceni la saaqiiray 1dii July maalinti uu dhashay israaci ba israaceeni iyo Soomaaliweyn ba dhimatay markii qaybti sidaa uu qaybiyeen. Oo ay dowladi la wareegen oo ay noqon lahayd gobol Lowyacaddo ila Ceelayo gobol badhsaab loo soo magacaabo badhasaab uu xukumo. Halka Soomaali ka dhimatay wa halka weyee, xaga Djibouti kamay badbaadin Soomaalinmo, waxa ay ku badbaaday Djiboutinimo. Kililka Shanaad kumu badbaadin Soomaalinmo wuxu ku badbaaday Ethiopianimo, NFD waxay ku badbaaday Kenyanimo ee daadki ina qaaday ba wada qaaday. Waxa loo bahan yahay in mar walba ee aanu xasusano wixi inaga lumay israaca konfuureed aanu raacnay waxa ay inaga lumisay saaxibo badan oo inu diyaar ahaa aynu isku xidhano oo ingiriiska oo qudha ah oo cidina mabay filayn dowladnimada la ina siyee ee ingiriiska ilahay inaga siyee, in cidlo lagu tuurayo cidna ismay lahayn.
Waxa weyee hawl baa inu taala oo wada jir baynu uu bahan ahay siyaasada maalimeedka ee khilaafka, siyaasada aan khilaaf lahayn siyaasad mahaa. Siyaasad aan khilaaf ku jirin siyaasad ba mahaa, waxa ay siyaasad uu tahay wa khilaaf la kala aragti duwan yahay han la kala leeyahay, wa garoonka kubada waxa ka weyn umada inad marba xasusnaato danta umada, nabad galyadeeda, wanaageeda iyo horumaarkeeda.”